Pregorexia, kutya kuwedzera uremu panguva yekuzvitakura | Bezzia
Pregorexia, kutya kuwedzera uremu panguva yekuzvitakura
Tony Torres | 11/01/2022 23:55 | Mimba
Kune zvakawanda zvinotya zvinogona kumuka zvakapoteredza kubata pamuviri, kunyanya kana iwe uri wekutanga-nguva. Chinhu chipi nechipi chisingazivikanwi chinokonzera kunetseka, nokuti kusava nechokwadi kwe kusaziva zvichazoitika kunounza huwandu hwakanyanya hwekushushikana. Kune vamwe vakadzi vanotarisana nekuchinja kwese kwepamuviri kunonakidza, asi kune vamwe vazhinji, kutya kukuru.
Kutya kuwedzera uremu panguva yekuzvitakura kuripo, ine hunhu huzhinji uye zita rakakodzera, kunyanya pregorexia. Chirwere ichi, kunyangwe chisina kuiswa muBhuku reMental Disorders sezvimwe zvirwere zvakafanana neanorexia kana bulimia, ndeyechokwadi uye inozivikanwa seanorexia yevakadzi vane pamuviri.
1 Chii chinonzi pregorexia?
1.1 Kudya chirwere zviratidzo muvakadzi vane pamuviri
1.2 Njodzi dze pregorexia kuna amai nemwana
Chii chinonzi pregorexia?
Pregorexia chirwere chekudya chinoitika panguva yekuzvitakura chete. Chimiro chikuru chechirwere ichi kutya kwaamai vanotakura kuwedzera uremu. Dambudziko rinogona kuisa hutano hwevose amai uye fetus panjodzi. Ichi chirwere chekudya chinogovana maitiro nemamwe akafanana. The nepamuviri kurovedza muviri zvakanyanya anodzora zvakanyanya kudyiwa kwecalorie, kuwedzera kune yakajairwa kudya zvakanyanya uye kunotevera kuchenesa.
Chirwere ichi chinogona kuitika kune vakadzi vasina kumbova nematambudziko ekudya kare. Zvisinei, zvinowanzoitika kuvakadzi vakamborarama kana kurarama nezvinetso zvekudya, zvakadai seanorexia kana bulimia. Zvisinei, kutambura nedambudziko iri munguva yakapfuura haisi vimbiso yokuti inogona kukura nenzira imwechete pamuviri.
Kudya chirwere zviratidzo muvakadzi vane pamuviri
Havasi vakadzi vose vanoona kuchinja mumiviri yavo nenzira imwechete, kunyange zvazvo vachiwanzogamuchirwa zvakasikwa uye vachifunga kuti zvinokonzerwa nekuti hupenyu hutsva huri kukura mukati mako. Kune mamwe madzimai kuona kukura kunoita dumbu, asi kune vamwe hazvina kudaro pasina dambudziko. Zvisinei, apo kutya kuwedzera uremu kune mamiriro epfungwa, zviratidzo izvi zvine chokuita nepregorexia zvingamuka.
ane pamuviri rega kutaura nezvenhumbu yako kana kuti anozviita nenzira isiri iyo, sokunge kuti akanga asiri naye.
Dzivisa kudya pamberi pevamwe vanhu, anofarira kudya ari oga.
Ane obsession ne kuverenga macalorie.
Unoekisesaiza zvisina mwero, mukuwedzera, pasina kufunga nezvezvinowanzoitika zviratidzo zvepamuviri.
Vanogona kuzvirutsa, kunyange zvazvo vachizoedza kuzviita vari voga.
Pamusoro pehutano hwemuviri, zvinogona kuonekwa nyore nyore kuti mukadzi kusawedzera uremu kazhinji pamuviri.
Zviratidzo izvi zvinogona kusaonekwa kana ukasagara pedyo nemukadzi ane pamuviri. Asi zvakadaro, wedzera kuoneka kusvika pakati penhumbuKana dumbu richiwedzera zvakanyanya, makumbo, maoko, chiso kana chiuno zvinotowedzera kusimuka nekuda kwenhumbu. Kunyange zvazvo shanduko idzi dzisina kufanana mumadzimai ose, dzinonyatsooneka kana dzisingaitike sezvakajairika.
Njodzi dze pregorexia kuna amai nemwana
Ngozi dzechirwere ichi chekudya pakubata pamuviri dzinogona kuva dzakawanda, kuna amai uye kumwana. Chekutanga, mwana ari mudumbu haagamuchire zvinovaka muviri zvaanoda kuti zvikure sezvazviri. mwana anogona uremu hwekuzvarwa hushoma, matambudziko ekufema, kuzvarwa nguva isati yakwana, malformations kana neurological disorders yekuoma kwakasiyana, pakati pevamwe.
Kuna amai, pregorexia inogona kukonzera matambudziko akakomba akadai seanemia, kushaya chikafu chinovaka muviri, arrhythmias, kurasikirwa nebvudzi, bradycardia, kushomeka kwemaminerari, kupera kwebhonzo, nezvimwe. Uye kwete chete panguva yekuzvitakura, matambudziko ehutano anogona kukanganisa kwenguva refu. Mukuwedzera kune zvese matambudziko ehutano hwepfungwa kuti chirwere ichi chinosanganisira.
Naizvozvo, kana iwe uchifunga kuti ungave uchitambura ne pregorexia pamuviri wako, zvakakosha zvikuru kuti iwe uzvirege iwe kutarisirwa uye uzviise mumaoko enyanzvi. Nokuda kwekuchengeteka kwako uye hutano hwemwana wako weramangwana, nokuti gare gare iwe uchakwanisa kudzokera kune uremu hwako, asi kana pane matambudziko mukukura kwayo, hauzombofi wakakwanisa kudzokera shure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Mimba » Pregorexia, kutya kuwedzera uremu panguva yekuzvitakura
Wakambofunga nezve kushandura chitandadzo chako kuita bhizinesi?
Erotophobia kana kutya kuita zvepabonde nemumwe wako